एक निश्चित समय सम्म , संयुक्त राज्य अमेरिका को बैंकिंग सिस्टम को विकृतकरण गरिएको थियो। देशमा थुप्रै हजारौं बैंकहरू थिए, तथापि, उनीहरूले राज्यलाई पेश गरेनन्। वास्तवमा, तिनीहरूमध्ये प्रत्येकको आफ्नै नीति थियो। साना अमेरिकी शहरहरूमा यस्ता संस्थाहरूले आफ्नै एकाधिकार स्थापित गर्न सक्थे, खास गरी यदि तिनीहरू ठूलो औद्योगिक ह्यान्ड्स द्वारा स्थापित भए। तथापि, 20 औं शताब्दीको सुरुमा, अमेरिकी बैंकिंग प्रणालीको विकासले फरक बाटो ल्यायो। यस क्षेत्रमा सबै संस्थाहरूमा नियन्त्रण स्थापित गर्न, एक संघीय आरक्षित प्रणाली सिर्जना गरिएको थियो। सरकारी निर्णयले धेरै बैंकहरू व्यवस्थित गरेको छ। उनीहरूको सहयोगको साथ, राज्य निजी संरचनाका गतिविधिहरूको निगरानी गर्न सक्षम थियो।
कुनै पनि संघीय आरक्षित बैंकलाई "बैंकको लागि बैंक" भनिन्छ, साथसाथै एक सरकारी बैंक भनिन्छ। सबै पछि, निजी संस्थानहरू लाई यस्तो संस्थाहरूको एकाइहरूलाई रकमको निश्चित भाग दिन आवश्यक थियो। एकै समयमा, फेडरल रिजर्वको मात्र बैंकले विनिमयको उद्धरण र शर्तहरू सेट गरेको छ। आज अमेरिकामा थुप्रै प्रकारका बैंकिंग संस्थाहरू छन्। सबैभन्दा पहिला, यो, बेशक, फेड को संरचना को तत्व। अर्को निजी बैंकहरू, लगानी संस्थाहरू र बैंक कार्यालयहरू आउँछन्। आज, तिनीहरूको बीच लगभग कुनै फरक छैन, किनकि लगानी लगानी बैंक र निजी बैंकले शेयरहरुमा धन कमाउन सक्छ। फेडरल रिजर्व प्रणालीले राज्य प्रायोजक गर्ने विशेष अधिकार छ। यो यो संस्था हो जसले सरकार द्वारा जारी गरिएको बहुमूल्य बाण्ड किन्न सक्छ।
तथापि, यो जाने बाट आय र मुनाफा ठूलो होल्डिंग्स र औद्योगिक कम्पनीहरूमा। किनभने राज्यले, त्यसोभए, यी संस्थाहरूमा प्राप्त रकम लगानी गर्न चाहानु हुन्छ। यूएस फेडरल बैंकिंग प्रणालीमा एक केन्द्रीय कार्यालय छ वाशिंगटनमा स्थित छ। यस एकाइ को प्रमुख 14 वर्ष को लागि निर्वाचित अध्यक्ष या अध्यक्ष छ। सीनेट अध्यक्ष र सम्पूर्ण FRS प्रणालीलाई प्रभाव पार्न सक्छ। तर राष्ट्रपति शायद नै त्यस्तो अवसर छ। संघीय बैंकिंग प्रणालीमा मुख्य व्यक्तिको चुनाव सीनेटरहरू द्वारा आयोजित गरिन्छ। अध्यक्षले यो पोष्ट अप गर्ने मौका पाएको छ र दोस्रो पटक यदि उनी बहुमतको मतदान गरेर छन। यो 2009 मा पुन: चुनावको क्रममा के भयो।
यूएस बैंकिंग प्रणाली छ6मुख्य चरणहरु मार्फत छ। देश पहिल्यै पहिले एकीकृत प्रणाली परिचय गर्न कोसिस गरेको छ, तर यसले कार्य नगरेको छैन। यसरी, 18 औं शताब्दीको सुरुमा संयुक्त राज्यको पहिलो बैंक अस्तित्वमा थियो। त्यसपछि छोटो समयमा त्यहाँ यस क्षेत्रमा एक केन्द्रीयकरण बल थिएन। केही पछि, संयुक्त राज्य अमेरिकाको दोस्रो बैंक गठन गरियो। चाँडै तथाकथित "नि: शुल्क बैंकिंग प्रणाली को युग।" त्यसपछि नेशनल बैंक स्थापना भयो। र 20 औं शताब्दीको प्रारम्भमा फेड देखा पर्यो। पहिलो दुई केन्द्रिय प्रणालीहरू सफल भएनन्। तिनीहरूले सम्झौताको विस्तार पाएनन् । यी पहिलो बैंक हिलमिटन द्वारा स्थापित गरिएको थियो। दुवै संगठनका थुप्रै कमजोरीहरू थिए, मुख्य मुख्य तरलताको कमी थियो।
तेस्रो केन्द्रित प्रणाली न केवल यसको उच्च तरलता र पर्याप्त लोचदार मुद्राको उपलब्धता को कारण विकसित गरिएको थियो, तर एक चरम परिस्थितिको कारण पनि। यसको लामो अस्तित्व संग, र विशेष रूप देखि अमेरिकी मिट्टी मा आफ्नो पदों को मजबूत, संघीय बैंकिंग प्रणाली को एक आर्थिक संकट को रूप मा 1907 मा भयो।
उनीहरूले बनाएको आतंक, राज्यले तुरुन्तै निजी बैंकिंग संस्थाहरूको गतिविधिको नियन्त्रण लिन निर्णय गरेको कारण थियो। र सरकार सफल भयो। फेडमा धेरै प्रकार्यहरू छन्। राष्ट्रिय राज्य बैंकको रूपमा बन्नको लागी , यो अमेरिकी सरकार, उपभोक्ता सुरक्षा, निजी ढांचाहरूमा नियन्त्रण र अधिक मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय पैसा लेनदेनमा भाग लिने उनको जिम्मेवारी हो। फेडले तरलता समस्याहरूसँग पनि सम्झौता गर्दछ र उद्धरणहरू समायोजन गर्दछ। यूएस बैंकिंग प्रणाली अधिक व्यवस्थित भएको छ।
एक विदेशी बैंकको साथ कसरी खाता खोल्न।
कुन बैंकलाई बचतको लागि छनौट गर्ने?
बैंकको दर्जा "टिन्कोफ"। जम्मा, ऋण, विश्वसनीयता मूल्याङ्कन
हालको खाता खोल्न अधिसूचना
वाहन ब्याट्री चार्ज
Zhyul भर्न: एक जीवनी, रचनात्मकता
एल्यूमीनियम radiators राम्रो छ? के दृढ एल्यूमीनियम रेडियेटर खरीद